Lilac floral pattern manakana hazavana polyester 8329 print sheer, China Lilac floral pattern manakana hazavana polyester 8329 print sheer Manufacturers, Suppliers, Factory - Zhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Ity lamba vita amin'ny chiffon malefaka nefa maivana ity dia manome lanja tsara ny tontonana ary mamorona hatsarana mikoriana rivotra miaraka amin'ny sivana maivana an-taonany maro ao an-trano. Tonga lafatra ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana, efitrano fisakafoana, lakozia, trano fambolena, studio, efitranon'ny ankizy, fety, patio. Ny ambain'ny manga manga dia tonga lafatra amin'ny fanolorana fikasihana rivotra amin'ny efitrano rehetra misy fijery semi-opaque.
Masinina manasa mangatsiaka, tsingerina malefaka ary misaraka. Aza fotsiana. Rano ambany ambany, esory avy hatrany, aza vy.